Sida CD loogu gubo muusig ama fiidiyoow kombiyuutarkaaga | War gadget
Sida CD loogu gubo muusig ama fiidiyoow kombiyuutarkaaga
Sidaan horeyba ugaga hadalnay a maqaalka Tilmaamaha Teknolojiyada halka aan tusnay barnaamijyada ugufiican ee loogu badalo CD-yada muusigkeena MP3, Qaabka jir ahaaneed ayaa kolba mid u dhinta. Way sii kordheysaa way adagtahay in la helo aalado leh taageero loogu talagalay cajalladaha, isbeddelku waa mid dijitaal ah. Si aad u badan, in ku dhowaad baabuur uusan la iman taageerada diskiga, iyo sidoo kale laptops.
Suuqa wuxuu tilmaamayaa qulqulka ama waxyaabaha la dalbado, halkaasoo adeegyada sida Netflix, Spotify ama Amazon Prime ay taagan yihiin, kuwaasoo leh adeegyo muusig iyo muuqaalba leh. Laakiin haddii aan nahay mid ka mid ah kuwa weli doonaya inay ka faa'iideystaan ​​rikoodhkeena si ay uga faa'iideystaan ​​fiidiyowgeena ama muusigga aan ku duubnay, waxaan haynaa dhowr barnaamij oo ku habboon si aan ugu duubno kuwaan qaab aad u fudud. Waxaan kaliya u baahanahay kombiyuutar leh qalabka wax lagu gubo ama mid ka baxsan.
1 Maxaan duubi karnaa maxaanse qaban karnaa?
2 Barnaamijyada lagu gubo saxannada ku jira Windows-ka
2.2 Khamriga 120%
2.4 DAEMON Qalabka Lite
3 Barnaamijyada lagu gubo saxannada macOS
3.1 Gubasho Gubasho
Maxaan duubi karnaa maxaanse qaban karnaa?
Waxaan dhihi karnaa waa farshaxan la ilaaway, waayahaas markii aan ku noolaan jirnay hareero cajalado maran oo diyaar u ah in lagu gubo kombiyuutarkeena; aad u badan sidaas Dukaan kasta, haba yaraadee, waxaan helnay diiwaanno aan ku iibsanno; waxaas oo dhan dib ayaa loogu celiyey asalka awgood ama adeegyo dalab ah sidaan horeyba u soo sheegnay.
Xitaa sidaas oo ay tahay, waligeed dhib malahan inaad haysato ikhtiyaar kale oo aan ku hubinno cajaladaha muusikada aan jecel nahay ama filimada aan dooneyno inaan ku sii wadno raaxeysiga laakiin ku ilaalinayno asalka asalka ah sanduuqa. O si fiican barnaamijyo ama bandhigyo aan dooneyno inaan u qaadno meelaha aan ka heli karno kumbuyuutar ee aan u tagno ciyaaryahan (wax sii kordhaya oo aan caadi ahayn). Waxaan kugula talineynaa xulashada barnaamijyada si loo qaado duubista nooc kasta oo feyl ah CD, DVD ama BLU-RAY.
Barnaamijyada lagu gubo saxannada ku jira Windows-ka
Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu da'da weyn, oo leh isugeyn kooban oo xoogaa waqtigiisu duugoobay, laakiin aad u macquul ah oo fudud. Barnaamijkani wuxuu noo ogolaanayaa inaan duubno wax kasta oo aan qiyaasi karno, qaab kasta oo aan u baahanahay oo kan ugu fiican ayaa ah inuu gebi ahaanba bilaash yahay.
Waxay ku habboon tahay nooc kasta oo Windows ah, laga bilaabo Windows 95 illaa Windows 10-ka ugu casrisan. Waxay noo ogolaaneysaa inaan duubno wax kasta oo jir ahaaneed ah, xitaa waxyaabaha aan caadiga ahayn sida qaabka ay adeegsadeen XBOX 360 (HD DVD).
Waxaan leenahay suurtagalnimada in mar la gubo saxanka, lagu xaqiijiyo iyada oo loo marayo softiweerka si loo hubiyo 100% inay si buuxda u akhrin karto akhristaha kasta. Waxaan wax ka beddeli karnaa cabbirka keydka ama waxaan ku qori karnaa saxankeena saxeex dijitaal ah.
Arrintan LINK waan soo dejisan karnaa barnaamijka.
Barnaamijka waxaa loo sameeyay iyada oo looga dan leeyahay in uu noqdo ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu abuuri karo darbooyin dalwaddii ah ama sawirro muuqaal ah. Waxay ku habboon tahay qaabab aan tiro lahayn oo ay ka mid yihiin: mds, iso, bwt, b5t, b6t, ccd, isz…. Shaki la'aan waxay noqoneysaa mid ku habboon abuurista nuqullo nuqul ah wax kasta oo maskaxda ku soo dhaca. Tusaale ahaan, waxaan u baahannahay nuqul CD ah oo aan ku rakibeyno Windows; barnaamijkan waxaan ku qaban doonaa daqiiqado gudahood.
Iyada oo Khamriga 120% dhammaan cloning disk waa arrin ka mid ah tallaabooyin fudud oo yar, taas oo iyada oo loo marayo interface fudud Adeegsade kasta wuu sameyn karaa iyadoo aan loo eegin sida uu u yahay khibrad la’aan.
Arrintan LINK waan soo dejisan karnaa.
Barnaamij kale oo duug ah, oo leh interface inkasta oo uu yahay mid qadiim ah oo kooban, haddana si fiican ayaa loo abaabulay oo aad u fudud oo macquul ah. Luuqad kasta waa la heli karaa markaa luuqadu dhib kuma noqon doonto isticmaale kasta. Barnaamijku wuxuu diiradda saarayaa duubista nooc kasta ha ahaadee, waxaan ka abuuri karnaa isku-darka tareennada gudaha MP3, AAC, WAV, FLAC ama ALAC.
In kastoo waxa aan sameyn karno ay tahay inaan si fudud u nuqulo feylasha sida haddii ay ahaan laheyd Pen Pen. Waxaas oo dhan waxaa lagu samayn karaa CD-yada iyo DVD-yada labadaba. La jaan qaada dhammaan noocyada Windows laga bilaabo 2000, XP ilaa Windows 10. Waxay leedahay ciyaaryahan isku dhafan, laakiin shaki la'aan ma noqon doonto adeegsiga aan siino, laakiin halkaas ayey ku jirtaa.
DAEMON Qalabka Lite
Waa barnaamijka heer sare ee waxqabadka "Abuureyaal" ka kooban Shaqadeeda ugu weyni maaha inay gubaan cajalladaha maqalka ama muuqaalka, laakiin waa halkii wuxuu diirada saarayaa sameynta sawirro muuqaal ah, sida ISO. Dhamaan kuwa ilaa hada aan soo dhajinay, shaki la’aan waa midka ku raaxeysanaya isdhexgalka ugu casrisan, xitaa waxaan dhihi lahaa liiska oo dhan, laakiin si isku mid ah oo dareen leh oo fudud.
Aynu nidhaahno barnaamijkani waa midka ugu habboon duubista, tusaale ahaan, ciyaaraha fiidiyowga ama filimada, labadaba DVD iyo BLU-RAY. Waxay noo ogolaaneysaa inaan ku sameyno dhowr qaybood haddii loo baahdo. Nooca bilaashka ah wuxuu ka kooban yahay xayeysiin, laakiin waa qiimaha la bixinayo haddii aanaan rabin inaan lacag ka bixino jeebkeena. In kasta oo aan haysanno ikhtiyaar aan ku iibsan karno liisanka aan xadidnayn inta uu nool yahay oo kaliya € 4,99, taas oo na siin doonta suurtagalnimada in lagu rakibo illaa 3 kombuyuutar.
Waxaan ku soo dejisan karnaa barnaamijka tan LINK.
Haa, waanu gubi karnaa saxanka muusiga adigoon wax rakibin kombiyuutarkeena hadii uu Windows rakibay. Laga soo bilaabo Windows XP ilaa 10, tani waa muuqaal waxtar leh oo la yimaada Windows Media Player.
Shaki kuma jiro Waa ikhtiyaar kuwa u baahan oo keliya inay si teel teel ah u duubaan CD-ga muusigga aan caadiga ahayn. Maaddaama tani ay aad u xaddidan tahay oo ay adag tahay inay ku siiso xulashooyin wax lagu qoro, in kastoo ay si fiican u shaqeyso oo tayada nuqulku aad u wanaagsan yahay. Waxa ugu fiican oo dhan, uma baahnid inaan sameyno rakibid ama soo degsiin dheeri ah.
Barnaamijyada lagu gubo saxannada macOS
Kuweena adeegsada waxyaabaha tufaaxa ah waxay sidoo kale xaq u leeyihiin inay gubaan saxannada noo gaar ah, sidaa darteed waxaan sidoo kale siin doonnaa waxyaabo kale oo aan uga dhigno nidaamka qalliinka macOS. Noocyadu way ka ballaadhan yihiin laakiin waxaannu ku raaxeysan karnaa xulashooyin la mid ah kuwa ku wanaagsan Windows-ka.
Waxaan ku bilaabaynaa waxa aniga ila ah doorashada ugu fiican; Magaceeda, sida ay tilmaamayso, waxaa loola jeedaa xawaareheeda, markaa kani waa barnaamij noo oggolaanaya inaan ku duubno cajalado xawaare ka sarreeya celcelis ahaan, in kastoo waxaan ikhtiyaar u leenahay inaan ku diiwaan galino xawaare hoose si aan u damaanad qaadno tayada ugu fiican suurtagal ah
Waxaan wajaheynaa mid ka mid ah codsiyada ugu dhameystiran ee liiska oo dhan. Waxaan ku duubi karnaa fiidiyowga AVI ama MPG. Abuur oo maamul maktabadaha DVD-ga oo wax ka beddel tusaalooyinka menugga. Waxaan ku dari karnaa calaamadaha astaamaha duubitaankeena, xitaa waxaan haysanaa suurtagalnimada inaan ku duubno feylasha fiidiyowga ee PAL ama NTSC, iyo sidoo kale bedelida saamiga dhinaca shaashadaha dusha sare.
Waa barnaamij sida ugu fudud ee magiciisa ka muuqata. Guba labada CD iyo DVD. Waxay ku socotaa nooc kasta oo nidaamka qalliinka ah MacOS X sida Catalina. Waxay noo ogolaaneysaa inaan gubeyno cajaladaha keydka, saxannada muusikada, abuurno is-dhexgal yar, isku dhufo cajalado iyo wax badan oo dheeri ah.
Waa barnaamij aad u fudud oo loo adeegsado is-dhexgal sida saaxiibtinimo leh maadaama ay fudud tahay oo ay yar tahay. Khasaaraha kaliya ee aan ka helayno barnaamijkaan ayaa ah in marka DVD la gubayo ay lagama maarmaan tahay in qaabka video-ga uu yahay .mpg. Dhibaato weyn ma aha in la tixgeliyo in barnaamijku si otomaatig ah ugu beddelo feylasha .mpg; In kasta oo tan loo baahan yahay inaynu sugno in muddo ah inta beddelaad la samaynayo ka hor duubista.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Sida CD loogu gubo muusig ama fiidiyoow kombiyuutarkaaga
AUKEY EP T25 Dib u eegista Maqalka